Mat as रूपैयाँ भन्दा कमको लागि अकाल स्खलन पिलहरू खरीद गर्नुहोस् र असीमित यौन सम्बन्ध राख्न सुरु गर्नुहोस्
Priligy खरीद गर्नुहोस्
समयपूर्व स्खलन भनेको के हो?
जब लि e्ग स्खलित हुन्छ, यो मूल रूपमा दुई लगातार कार्यहरू हुन आवश्यक हुन्छ: पहिले उत्सर्जन र त्यसपछि निष्कासन। चिकित्सा विज्ञान मानिन्छ कि सेरोटोनिन न्यूरोट्रान्समिटर स्खलन परिवर्तनको लागि जिम्मेवार छ। अपर्याप्त स्तर सेरोटोनिन समयपूर्व स्खलनको लागि सम्भावित कारण मानिन्छ।
जब शीघ्रपतन पुरुषलाई हुन्छ, यो अत्यन्त लाजमर्दो हुन सक्छ, अपमानित हुन सक्छ र उसलाई एक मानिस जस्तो कम महसुस गराउन सक्छ। यसले आफ्नो पार्टनरलाई संतुष्ट नगरेको कारण सम्बन्धमा चोट पुर्‍याउन सक्छ। यदि तपाइँलाई यो हुन्छ भने, चिन्ता नलिनुहोस्, यो एक साधारण गुनासो हो पुरुषहरू, विशेष गरी युवा पुरुषहरूमा। सांख्यिकीय रूपमा, पीईले संयुक्त राज्य अमेरिकामा २ 25%-%०% मानिसहरूलाई असर गर्छ। वास्तविकतामा, अधिकतर पुरुषहरूले कम्तिमा एक पटक आफ्नो यौन मुठभेडमा यो अनुभव गरेका छन्। चिन्ता र अधिक उत्तेजनाको कारण यो प्रायः सम्बन्धमा शुरु हुन्छ।
यदि एक व्यक्ति आधिकारिक रूपमा बारम्बार पीई को निदान गर्न को लागी, सबै आशा छैन। यौन गतिविधि को दौरान उत्तेजना नियन्त्रण को विकास गर्न मानसिक बस्ती सुधार र प्रशिक्षण वर्तमान मा पीई को एक उपचार को रूप मा प्रयोग भइरहेको छ। त्यहाँ बजार मा पहिले नै औषधी छन् तर पनि प्रयोग भइरहेको छ जो। अहिलेको रूपमा Dapoxetine आधिकारिक रूपमा निदान गरिएको पीईको उपचारको लागि नियामक प्राधिकरणको साथ एकल औषधि हो, तर अहिले संयुक्त राज्य र युरोपियन देशहरूमा परीक्षण चरणमा छ।
शीघ्रपतनको कारण: के कारण शीघ्रपतनको कारण हुन्छ?
के कारण अकाल स्खलनको निराशाजनक प्रश्न धेरै पुरुषहरूको दिमाग पार गर्ने एक हो। त्यहाँ पीई निम्त्याउने धेरै फरक कारकहरू हुन सक्छन्: युवा, मनोवैज्ञानिक मुद्दाहरू, स्वास्थ्य समस्याहरू, आदि। यो सँधै मानिसमा यी समस्याहरूको कारण के हो भनेर पत्ता लगाउन सजिलो हुँदैन तर, आशा छ, हामीले संकलित गरेको जानकारीको अनुसन्धान पछि, तपाईं तपाइँसँग असर गर्ने PE का कारणहरूको बारेमा राम्रो विचार हुनेछ।
तपाईं वा तपाईंको पार्टनरमा पीईको लागि जिम्मेवार के हो भनेर पत्ता लगाउने कोसिस गर्दा त्यहाँ बिभिन्न कारकहरू छन्। हामी यस पृष्ठमा सबैभन्दा सामान्य कारणहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं र तपाईंलाई यस निराशाजनक स्थितिमा केही अन्तर्दृष्टि दिन कोशिश गर्नेछौं।
चिन्ताको विषय: समयपूर्व स्खलनको कारणहरू पत्ता लगाउने क्रममा धेरै पुरुषहरूले चिन्ता मुख्य कारण हो भनेर पत्ता लगाए। यो एक प्राय जसो कारण पुरुषहरू स्खलन सम्बन्धी मुद्दा हुन्। साधारणतया, तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईले यौन सम्बन्ध राख्नु भएको छ र तपाई चिन्तित हुनुहुन्छ। तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ किनभने तपाईं क्लाइमेक्स गर्नु भन्दा पहिले आफ्नो साथीलाई पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने निश्चित गर्न चाहनुहुन्छ। यो चिन्ता (यो राम्रो अभिप्रायबाट आउँदछ) तपाईंको समग्र मानसको लागि नराम्रो हो र, अन्ततः, तपाईंको लागि पीई मुद्दाहरूको कारण गराइन्छ। तपाईंको चिन्ताले तपाईंलाई द्रुत स्खलनको कारण दिन्छ। यसले अधिक चिन्ता निम्त्याउँछ जुन अधिक मुद्दाहरूको लागि अग्रसर गर्दछ। यो एक धेरै निराश र आत्म-सम्मान हानि चक्र बन्न सक्छ। शुभ समाचार यो हो कि तपाईं आफ्नो सेक्सनसँग सम्बन्धित चिन्ताको विषयहरूलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। खराब समाचार यो हो कि यसले केहि समय लिन्छ। तपाईंले मस्तिष्क र शरीरलाई पुन: प्रोग्राम गर्न आवश्यक छ, धीमा गर्न, चिन्ता हटाउन र सेक्सको आनन्द लिन। चिन्तासँग कारोबार गर्ने केही महान जानकारीको लागि, तलको लिंक अनुसरण गर्नुहोस्।
दोषी मुद्दाहरू: दोषी, चिन्ता जस्ता, पीईको बारेमा सबै भन्दा साधारण समस्याहरू मध्ये एक हो। दोषी एउटै चक्र मा चिन्ता जस्तै काम गर्दछ: तपाईं PE मुद्दाहरूको छ कि तथ्यलाई कारण दोषी छ जो तनाव र चिन्ता पैदा गर्दछ जो तपाईं समयपूर्व स्खलनको कारण। यो चक्र भाँच्नु पर्छ। तपाईंले दोषीलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ र आफ्ना मुद्दाहरूको नियन्त्रण कसरी लिने भनेर जान्नुपर्दछ।
अनुभवको स्तर: तपाईको लैंगिक अनुभवको स्तर मुख्य कारण हुन सक्छ तपाईको स्खलन सम्बन्धी मुद्दा। कम अनुभव लिने पुरुषहरूसँग समयपूर्व स्खलन सम्बन्धी समस्या हुने प्रवृत्ति हुन्छ। यो कारण प्रायः युवा पुरुषहरूमा फेला पर्दछ जसको अलि बढी परिपक्व मानिसको रूपमा यत्ति धेरै यौन सम्बन्ध राख्नु पर्दैन। एक तुलनात्मक रूपमा यौन अनुभवहीन व्यक्तिको रूपमा, तपाई अत्यधिक उत्साहित हुन र धेरै चाँडै आउनको लागि यो धेरै सामान्य छ।
हस्तमैथुन प्रविधि: हस्तमैथुन गर्ने प्रविधि प्राय: पीई समस्या निम्त्याउँछ। सामान्यतया, यदि तपाइँ आफैंलाई खुशी पार्ने बित्तिकै क्लाइमेक्सिंग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको पार्टनरसँग समयको एक सभ्य रकमको लागि लामो समय सम्म रहिरहनु भएको छ। भाग्यवस तपाईंको लागि, यो व्यवहार गर्न सजिलो समस्या हो। तपाईंले वास्तवमै गर्नुपर्ने कुरा तपाईंले हस्तमैथुन गर्ने समयको मात्रा बढाउन सुरू गर्नु हो। यदि तपाईं एक मिनेटमा आफैलाई क्लाइमेक्समा ल्याउनुहुन्छ भने, दुई मिनेटको लागि जानुहोस्। एकचोटि तपाईले यो पाउनुभयो, चार मिनेट को लागी प्रयास गर्नुहोस्। हस्तमैथुन प्रविधिहरूको अभ्यास गरेर तपाईं आफ्नो यौन ट्रिगरहरूको बारेमा धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ। यी अभ्यासहरूले तपाईं बेडरूममा एकदम चाँडै नै ठूलो लाभहरू देख्न अनुमति दिनुहुन्छ।
सम्बन्धमा मुद्दाहरू: के तपाई आफ्नो जीवनसाथीसँग झगडा गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाइँसँग बहस छ जुन तपाइँको सम्बन्धलाई असर गरिरहेको छ? यदि त्यसो हो भने यो सम्बन्धले तपाईंको सम्बन्धमा यौन समस्या निम्त्याउन सक्छ। जब तपाईं आफ्नो प्रेमिका, पत्नी, पार्टनर, इत्यादिसँग लड्दै हुनुहुन्छ, भावनाहरू, तनाव र तनाव स्तरहरू सबै माथि बढाइन्छ। यसले बेडरूममा चिन्ता र दु: ख ल्याउँछ। यदि तपाईंलाई अहिले सम्बन्ध समस्याहरू छन् भने यो अवस्था तपाईंलाई परिचित देखिन्छ: तपाईं झगडा गर्नुहुन्छ, तपाईं “मेक-अप” गर्नुहुन्छ, तपाईंले सेक्स गर्नुभयो। जे होस्, तपाईंलाई थाहा छ "मेक-अप" अस्थायी मात्र हो त्यसैले जब तपाईं यौन सम्बन्ध राख्नुहुन्छ तपाईं अझै धेरै तनाव र चिन्तित हुनुहुन्छ। यसले तपाईंलाई आराम गर्नबाट रोक्छ र तपाईंलाई समयपूर्व स्खलनको कारण दिन्छ।
आनुवंशिक जीनहरू: के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको जन्मजात जीनले समयपूर्व स्खलन निम्त्याउन सक्छ? यो साचो हो! पीई बाट पीडित धेरै पुरुषहरु लाई थाहा भयो कि उनका बुवाहरु पनि यही अवस्था बाट ग्रस्त थिए। वैज्ञानिकहरूले निम्न परिदृश्यलाई सिद्धान्तमा राख्छन्: यो विश्वास गरिन्छ कि धेरै वर्ष अघि, गुफामा बस्नेहरूले समयपूर्व स्खलन प्रतिक्रिया विकास गरे जुन उनीहरूलाई बाँच्न मद्दत गर्थे। थ्योरी यो हो कि गुफामयी जो छिटो स्खलन गर्न सक्षम थियो उही एक हो जो धेरै संख्यामा बच्चाहरूको लागि धन्यवाद बाँच्न सक्छ। वैज्ञानिकहरूको भनाइ अनुसार यस समयको सेक्स भनेको अस्तित्व अझ रमाइलोको बारेमा थियो। सेक्सको मुख्य लक्ष्य भनेको आनन्द लिनुको विपरीत गर्भधारण गर्नु थियो। तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि यो सिद्धान्त तपाईं माथि निर्भर छ। शुभ समाचार यो हो कि तपाईंले आनुवांशिकलाई तपाईंको यौन जीवन नियन्त्रण गर्न दिनु पर्दैन। तपाईको शीघ्रपतन सम्बन्धी मुद्दाहरूमा पकड लिन तलको लिंक अनुसरण गर्नुहोस्।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED): धेरै पुरुषहरू यो थाँहा छैनन्, तर प्राय: जसो erectile dysfunction ले PE पैदा गर्न सक्दछ। यदि तपाईं बितेको १ 15 बर्षको बखत कुनै पनि बिन्दुमा जागा हुनुहुन्छ भने, तपाईं इरेक्टाइल डिसफनसिटन (ED) सँग परिचित हुनुहुन्छ। हामी यस विषयको बारेमा वाणिज्यिक पछि वाणिज्यको बमबारीमा छौं। ईडी चिन्ता र विश्वास को कमी को कारण PE पैदा गर्दछ। यी भावनाहरू ED सँग सम्बन्धित छन् र PE सँग सिधा सम्बन्धित हुन सक्छ। मूलतः, ED को साथ एक व्यक्तिले यौन सम्बन्धको कार्य सुरू गर्दछ तर ऊ आफ्नो निर्माणलाई कायम राख्नमा यति चिन्तित हुन्छ कि ऊ कार्यको माध्यमबाट हतार गर्दछ जसको परिणाम द्रुत रूपमा चरमोत्कर्षमा पर्छ।
थाइरोइडको साथ समस्याहरू: PE र थाइरोइड मुद्दाहरूको अध्ययन हालै सम्म गरिएको छैन। त्यसो भए, २०० doctors मा, डाक्टरहरूले एउटा अध्ययन प्रकाशित गरे जुन थाइरोइड मुद्दाहरू (हाइपर र हाइपोथायराइड) र शीघ्रपतनको बीचको सम्बन्ध जाँच गर्दछ। तिनीहरूले के पत्ता लगाए कि हाइपोथायराइड समस्या भएका पुरुषहरूमा स्खलन सम्बन्धी मामिलाहरूको एकदम कम घटना थियो। यद्यपि, हाइपरथाइरोइड मुद्दाहरू भएका पुरुषहरूमध्ये 2006० %ले स्वीकारे कि उनीहरूले आफ्नो जीवनमा शीघ्रपतनको समस्या भोगेका थिए। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि थाइरोइड तपाईंको पीई समस्याहरूको कारण हो भने तपाईंले आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनु पर्छ।
हार्मोन मुद्दाहरू: कहिलेकाँही, हर्मोन मुद्दाहरूले पीई र यौन समस्या निम्त्याउन सक्छ। जब तपाईंको उमेर बढ्दै जान्छ, टेस्टोस्टेरोनको स्तरले तपाईंको शरीरमा ड्रपहरू उत्पादन गर्दछ जुन तपाईंको स्ट्यामिनामा नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। तल्लो स्तर DHEA र टेस्टोस्टेरोन समयपूर्व स्खलनको सम्बन्धमा एक मुख्य शारीरिक अपराधी मध्ये एक देखाइएको छ। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि हार्मोनको कमीले तपाईंलाई स्खलन समस्या पैदा गर्दछ भने, म सुझाव दिन्छु कि तपाईं आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्। त्यहाँ धेरै टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेन्टहरू उपलब्ध छन् र तपाईंको डाक्टरसँग एक राम्रो विचार हुन्छ जुन तपाईंको लागि उत्तम कार्य गर्दछ।
सामान्यतया, यी PE को बारेमा सबै भन्दा साधारण समस्या हो। यी मुद्दाहरूले तपाईंलाई कसरी असर गर्दछ र तपाईंको PE सर्तमा पुग्ने समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण छ।
समयपूर्व स्खलन उपचार: कसरी शीघ्रपतनको उपचार गर्ने?
तपाईंको घनिष्ठ समस्याहरूको बारेमा तपाईंको स्वास्थ्य विशेषज्ञसँग कुरा गर्नु अवस्था पिट्ने पहिलो चरण हुन सक्छ। एक डाक्टर वा चिकित्सक संग कुराकानी तपाईं सहज महसुस गर्न को लागी मद्दत गर्न सक्छ र ती व्यायाम वा औषधि को मामला मा तपाइँको समयपूर्व स्खलन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्न को लागी सही दिशा मा देखाउन सक्षम हुन सक्छ। तपाईले कुनै पनि प्रश्न सोच्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले आफ्नो चिकित्सकलाई भित्र पस्नु भन्दा पहिले सोध्न चाहानुहुन्छ, तपाईले चाहानु भएको सबै कुरा सोध्नु हुन्छ।
यदि तपाईं उत्तम समयपूर्व स्खलन उपचारको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं निम्न जानकारीको शरीरलाई विचार गर्न चाहानुहुन्छ।
समयपूर्व स्खलनको उपचारको बारेमा जान सक्ने धेरै तरिकाहरू छन्। विगतमा, डाक्टरहरूले यो अवस्था शुद्ध मानसिक वा मनोवैज्ञानिक हो भन्ने विश्वास गर्थे, तर आज चिकित्सा पेशेवरहरूले महसुस गरे कि अवस्था त्यो भन्दा जटिल छ।
यसमा दुबै शारीरिक र मनोवैज्ञानिक पक्षहरू समावेश छन् जुन समस्यामा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ। धेरै जसो केसहरूमा, जो डाक्टरकहाँ जान्छन् उनीहरूलाई औषधी दिइन्छ र समयपूर्व स्खलन उपचारको रूपमा केही व्यायाममा काम गर्न सिफारिस गरिन्छ।
शीघ्रपतनको रोकथामका लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने गोलहरू, डिसेन्सिटाइजिंग स्प्रे, र अन्य उत्पादनहरू मध्ये केही हामीले तल सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्पहरू सूचीबद्ध गरेका छौं:
त्यहाँ बिभिन्न प्रकारका औषधिहरू छन् जुन अवस्थालाई उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ; सबैभन्दा नयाँ dapoxetine हो। यो यति नयाँ छ कि यसलाई अझै एफडीएद्वारा परीक्षण गरिएको छ। भर्खरका अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन् कि ट्याब्लेट लिने बिरामीहरूले चिन्हित सुधारहरू देखे। यस औषधिको साइड इफेक्टमा मतली र टाउको दुखाइ समावेश छ, जबकि प्रभाव सामान्यतया हल्का हुन्छन्।
त्यहाँ डिसेन्सिटाइज गर्ने क्रीम पनि विभिन्न प्रकारका छन्; यी लि less्ग कम संवेदनशील बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यो सहयोगी छ किनकि यसले महिलालाई ओर्गास्ममा पुग्न लामो समय लिन्छ यसले एक पुरुषलाई भन्दा डिसेन्सिटाइजिंग समाधानहरू लोशन, क्रीम वा स्प्रेमा उपलब्ध छन् र स्खलन अघि सेक्सको समय विस्तार गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। जहाँसम्म, यदि यो कन्डम बिना प्रयोग गरिएको छ भने यसले उनीहरूको इन्द्रियलाई सुन्न पनि सक्दछ जब यसले अझ ठूलो समस्या निम्त्याउँछ।
त्यहाँ केहि औषधिहरू पनि छन् जस्तै प्रोजाक र बिभिन्न एन्टिडप्रेससन्टहरू जसले स्खलनलाई कम गर्दछ जसलाई उनीहरूको साइड इफेक्टको रूपमा लिन्छ। यी लाभदायक छन् किनभने एक सानो खुराक मात्र आवश्यक छ। तपाईंले प्रत्येक दिन यी लिनुपर्दैन, सेक्स गर्नु अघि थोरै मात्र डोज लिनु पर्याप्त हुनु पर्छ। भर्खरका अध्ययनहरूले सुझाव दिएका छन कि यो केवल 39%% बिरामीहरूको लागि कार्य गर्दछ त्यहाँ आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति, पखाला, निन्दन अभाव र लतको सम्भावना सहित धेरै साइड इफेक्टहरू पनि छन्।
भियाग्रा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र केहि बिरामीहरूमा सफल हुन्छ। यी निर्माण औषधि सबै स्खलनमा ढिलाइ लाग्दछ। यद्यपि यी औषधिहरू यस उद्देश्यका लागि अनुमोदित छैनन त्यसैले उनीहरूलाई प्राप्त गर्न अलि गाह्रो हुन सक्छ।
समयपूर्व स्खलन रोकथाम: कसरी शीघ्रपतन रोक्न?
तपाइँ सबैलाई थाहा छ यस सर्तको बारेमा र केमा यसले समावेश गर्दछ, तर तपाइँ यसलाई कसरी रोक्नुहुन्छ? शताब्दियौंदेखि - हो, तपाईले सुन्नुभयो, शताब्दियौं - विश्वभरका मानिसहरूले पीईलाई रोक्नको लागि आविष्कार गरेका छन्, थोरै सफलता संग। आज पुरुषहरु विज्ञान को लागी अधिक सफलता पाइरहेका छन्। प्राकृतिक र प्रभावकारी रूपमा शीघ्रपतन रोक्नको लागि यहाँ केहि तरिकाहरू छन्।
प्रारम्भिक स्खलन रोक्नको लागि एउटा राम्रो तरिका कन्डम प्रयोग गर्नु हो। कन्डमहरू सुरक्षित सेक्स, गर्भावस्था र एसटीडी रोक्नको लागि राम्रो हो, र उनीहरूले संभोगको बेला तपाईंको लि of्गको संवेदनशीलता कम गर्ने थप फाइदा पनि छन, जुन समयपूर्व स्खलन रोक्नको लागि एक उत्तम तरिका हो।
प्रारम्भिक स्खलन रोक्नको लागि अर्को सरल तर प्रभावकारी विधि भनेको तपाईले लैंगिक सम्बन्ध राख्नु भन्दा एक वा दुई घण्टा पहिले हस्तमैथुन गर्नु हो। यसले पछि क्लाइमेक्स पुग्न अझ गाह्रो हुन्छ, जसले तपाईंलाई छिटो स्खलन रोक्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं यी दुई विधिहरू धेरै संयन्त्रहरू संयोजन गर्नुहुन्छ भने तपाईं ओछ्यानमा अझ लामो समय सम्म टिक्न सक्नुहुनेछ।
विधिहरू परिवर्तन गर्नुहोस्
समयपूर्व स्खलन रोक्नको सबैभन्दा सजिलो तरीका विधिहरू परिवर्तन गरेर हो। यदि तपाईं संभोगको क्रममा आफैलाई चरमोत्कर्षको लागि तयार महसुस गर्नुहुन्छ भने, तुरुन्तै सम्भोग रोक्नुहोस् र यी तीन युक्ति मध्ये कुनै पनि प्रयोग गर्नुहोस्:
यसको सट्टामा गोलाकार, ढिलो गतिको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं ती स्ट्रोकहरू परिवर्तन गरेर क्लाइमेक्स रोक्न सक्नुहुन्छ। स्थिर स्ट्रोकको सट्टामा, यसको सट्टा गोलाकार, ढिलो स्ट्रोक प्रयोग गर्नुहोस्। यसले तपाईंको ग्लान्स (तपाईंको लि of्गको टुप्पो) बाट तपाईंको सम्पूर्ण लि to्गमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, जुन कम उत्तेजक हो।
स्थिति परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईंको पार्टनरलाई स्थिति परिवर्तन गर्न भन्नुहोस्। विभिन्न कोणले लि to्गको वर्तमान उत्तेजना रोक्छ र यसलाई 'कन्फ्यूज गर्दछ'।
यसमा तान्नुहोस्। तपाईं मैन्युअल्ली आफ्नो लिंग हेरफेर क्लाइमेक्स रोक्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं आफूलाई चरमोत्कर्षमा पुगेको महसुस गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको पार्टनरबाट बाहिर निकाल्नुहोस् र तपाईंको स्क्रोटममा निचो गर्नुहोस्। माटोको माथिल्लो भागमा जान भन्दा पहिले माछालाई न्यानो पार्दा क्लाउम्याक्सको पूर्वानुमान गर्दा स्क्रोटम कडा हुन्छ र बढ्छ। यसमा तल तान्दै, यो प्रक्रिया हुँदैछ रोक्छ।
समयपूर्व स्खलन समस्याहरूलाई पार गर्न समय र अभ्यास लिन सक्दछ। तपाईको पार्टनरसँग इमान्दार हुनु र आफ्ना भावनाहरूको बारेमा कुरा गर्नु महत्वपूर्ण छ। विश्वास र अनुकम्पा बाँडफाँड समस्या समाधान गर्न र निकटता बढावा मद्दत गर्दछ। यदि तपाइँले याद गर्नुभयो कि तपाइँको शीघ्रपतन सम्बन्धी चिन्ताहरू सुधार भइरहेको छैन भने, दिमागमा राख्नुहोस् कि कुशल यौन थेरापिष्टहरूबाट सहयोग हातमा छ।